अध्ययनशीलता बिकासकालागि पुस्तकालय निर्माण अभियानमा लियो क्लबका युवाहरु - In Depth Nepal Pvt. Ltd.
पुस ९, तनहुँ
अध्ययनशीलता बिकासकालागि पुस्तकालय निर्माण कार्यक्रम लिएर लियो क्लब अफ काठमाडौं कोहिनुरका युवाहरु तनहुँ पुगेका छन । तनहुँ जिल्लाको रिसिङ्ग स्थित ‌श्री शिव सरस्वति माध्यमिक विद्यालयमा स्थापित उक्त पुस्तकालयलाई सघाउन पुस्तक तथा आवश्यक सामाग्री बोकेर लियो क्लब र जापान स्थित पुस्तकालय ए.पि.यु. संस्थाका प्रतिनिधीहरु पुगेका हुन ।
गत फेब्रुअरीमा “Building Nations Through Building Libraries” अन्तर्गत स्थापित गरिएको पुस्तकालयलाई स्थायित्व प्रदान गर्न लियो क्लब अफ काठमाडौं कोहिनुर र पुस्तकालय ए.पि.यु. ले यस पटक “Learner’s Room: A Path to Wisdom” नामक परियोजनानै बिकास गरि सो पुस्तकालयलाई पुस्तकहरु र पुस्तकालय सामाग्रीहरु हस्तान्तरण गरेको बताईएको छ । परियोजना अन्तर्गत यी दुई संस्थाहरु नेपालका विभिन्न विद्यालयमा पुस्तकालय स्थापना तथा विध्यार्थीहरुमा पठन संस्कृतिको विकास गर्न खोजेका छन् ।
पुस्तकालय ए.पि.यु.का सह–संस्थापक रासी महर्जन र लियो क्लब अफ काठमाडौं कोहिनुरका अध्यक्ष लियो अभिनव जोशीको नेतृत्वमा गएको टोलीले पुस ५ देखि ८ सम्म तनहुँ गई यस पाली विभिन्न कार्यक्रम मार्फत पुस्तकालय सुधार, जनचेतना जगाउने र विद्यालयका केही छात्र–छात्राहरुलाई छात्रवृत्ति प्रदान समेत गरेका छन ।
महर्जन र लियो जोशी दुबै भन्छन् “तनहुँमा स्थापित गरिएको पुस्तकालय हाम्रो पहिलो पुस्तकालय‌ मात्र हो। हाम्रो संस्थाहरु प्रत्येक वर्ष कमसेकम एक पुस्तकालय नेपालको विभिन्न स्थानमा स्थापित गर्न प्रयास गर्ने छौँ। यसका लागि हामी सबैबाट सहयोगको अनुरोध गर्दर्छौँ।”